Choputa Hoi, obodo mara mma na Vietnam! - THE INDIAN FACE
Ọ bụrụ na ị gara Hoi An (H Ani An), na-ewere ihe ndị kasị mma obodo na Vietnam, nke a bụ oge gị ime ya! Hoi An Ọ bụ obodo gbara osimiri okirikiri a maara nke ọma maka ịma mma ya, akụkọ ntolite ya, yana etu esi echekwa ebe ochie ya na ọtụtụ ọwa ya. Eleghi anya ị maraworị ya, mana Vietnam adịbeghị anya bụrụ otu n'ime obodo ndị njem nlegharị anya na afọ 10 gara aga na, na-esote ya, obodo Hoi An Ọ ghọọ otu n'ime obodo ndị kacha eleta na mpaghara ahụ.
Anyị dị n'etiti ọkara n'etiti Ho Chi Minh na isi obodo Hanoi Hoi An, otu n'ime obodo ndị kachasị nleta ma maa mma na mba ahụ. Ije ije n'okporo ámá ya bụ iku ume ọdịnala na ọdịbendị, n'ezie otu n'ime akụ dị na Vietnam. Gaghị echefu njem nlegharị anya nke obodo ochie ya nke jupụtara na ebe ndị nwere mmasị yana ọtụtụ narị ụlọ arụsị ime mmụọ gburugburu obodo ahụ ga-ebuga gị oge ochie, juputara na akụkọ ihe mere eme na ọdịnala ndị nna ochie. Igwe ya nke obodo ọdụ ụgbọ mmiri ochie na-eku ume na ikuku!
Ọ bụ otu n'ime njem kachasị mma maka ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị Eshia yana nkwụsị kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ị na-eleta Vietnam. Ọ bụ n'ezie otu n'ime ebe ndị ahụ ị na-akwa ụta maka ileta ọbụlagodi nke abụọ. Ọ bụrụ na ị na-eche gaa na Hoi An Anyị na-echetara gị na ọ bụghị nnukwu obodo, yabụ imefu mmadụ ole na ole ga-ezu iji gabiga ya ma nwee ọ itụ. Mana n'ezie ịchọrọ ịhazi oge karịa na ịgbatịkwu oge njem gị!
Jupụta na ụlọ ochie, ụlọ akụkọ ihe mere eme, ụlọ nkwakọba ihe na ụlọ ahịa nke akwa, poselin ma ọ bụ ihe ncheta, Hoi An a ka edobekwara ha nke ọma n'okporo ámá dị n'akụkụ osimiri ahụ, nke bụ ihe ịtụnanya ịmasị mgbe ị gara ije. Ọ bụ ezie na akụkụ kachasị mma bụ mgbe abalị dara, mgbe ọtụtụ narị lantern na-acha gburugburu na cylindrical shapes dị ka nnukwu ugu na-enwu n'okporo ámá ka ha kwụgidere n'akụkụ abụọ nke ụlọ ndị ahụ. N'ezie ezi ihe ngosi!
You dịla njikere ịmatakwu banyere obodo mara mma kacha mma Vietnam? Nọgidenụ na-agụ ma chọpụta ihe ahụmahụ nke ịga obodo Hoi An!
Otu esi enweta Hoi An?
O kwere omume iru Hoi An n'ọtụtụ ụzọ: ịnwere ike ịme ya site na ụgbọ ala, ụgbọ ala, ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ elu. Ebe ọ bụ na obodo ahụ aghọwo otu n'ime ebe ndị njem nleta na-eme nke ọma na mba ahụ, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyefefe, naanị ị ga-ahọrọ nke kachasị mma maka mkpa gị na mmefu ego gị.
Ga-elebara anya Hoi An O nweghi ọdụ ụgbọ oloko ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu. O bu ya kpatara na ikwesiri ichikota da Nang, otu nwanna nwaanyị dị ihe dị ka nkeji iri anọ na ise. N'ọnọdụ ọ bụla, ịnwere ike ịhọrọ ohere nke iwe ọrụ obere ọrụ na-enye na-enyefe na Hoi An maka ihe 110.000 VND (gburugburu € 4).
Ọ bụrụ n'ịchọrọ nhọrọ akụ na ụba, ịnwere ike iji bọs gaa obodo ahụ, nke ị nwere ike iru n'akụkụ ọ bụla na Vietnam. Dịka ọmụmaatụ, site na obodo Hue ọ ga-ewe ihe dị ka awa 3-4 ma site na Nha Trangs ọ ga-ewe 8-9 awa, ọ bụ ezie na ọ nwere oche dị jụụ karị maka njem ahụ. Enwere ike iwere ha abụọ na mgbede nke ehihie (13:30 pm) ma ọ bụ na mgbede (20:00 pm). Nhọrọ abụọ a dị n'etiti 180.000 na 190.000 VND. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhọrọ Open Bus Tour, nke jikọtara Hanoi na Ho Chi Minh, na nkwụsị na obodo dị iche iche, gụnyere Hoi An.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Hoi An?
Dịka anyị kwuburu na mbụ, ije ya, ngwakọta nke oge na ụdị dịgasị iche iche bụ ihe na-akọwa ma na-amata ọdịiche Hoi An nke ndị ọzọ Vietnam. Obodo a dị n'akụkụ osimiri jupụtara na ụlọ arụsị ndị China na Japan, ụlọ ndị mara mma nke French, na ụlọ ndị Vietnam mara mma. Agbanyeghi n’enweghi obi abụọ, n’etiti ihe kacha pụta n’obodo ahụ, anyị nwere ike ikwupụta ịdị jụụ nke okporo ámá ya, akwa mmiri ya mara mma nke Japan nwere pagoda yana ịdị nso ya ogologo osimiri. Ma anyị ga-ekwu banyere nke a mgbe e mesịrị!
Kedu otu esi eleta ụlọ nsọ ya na ebe mmasị ya?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ileta ụlọ arụsị, ị ga-agakwa na Center for Tourist Information Center nke Hoi An, ebe ị ga-enwe nhọrọ ịzụta tiketi ọdịbendị kwekọrọ na ịbanye n'ụlọ arụsị nke obodo, ebe ọ bụ na UNESCO kwupụtara ya World Heritage Site na 1999. itingga ụlọ nsọ 5 ga-efu gị ihe dị ka 120000 Dons, nke bụ ihe dịka 4,50 , € XNUMX, nke dị ezigbo mma ma dịkwa mfe inweta. Ọ bụrụ na ịzụtaghị tiketi ahụ ebe ahụ, ị ​​ga-azụta tiketi nke ọ bụla gaa ebe ọ bụla, ọ ga-akakwa ọnụ.
N'ime ụlọ ọrụ ozi ị hụrụ ndepụta nke nwere ọtụtụ narị ụlọ arụsị iji hụ ma mara. Dị ka anyị na-ekwu, ntinye a dị mma ka ịhọrọ 5 nke ịchọrọ ịga leta n'etiti ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ebe ọdịnala, ụlọ arụsị na ụlọ ọdịnala, ndị dị jụụ ma dịkwa mma. N'ime ha, n'ezie, oriọna ọdịnala na-eju eju, kamakwa ọdọ mmiri mara mma, akwa mmiri dị n'ime, ihe osise dragon, na anụmanụ ndị ọzọ mara mma na-enwu n'abalị.
Kedu ka esi aga obodo ochie nke Hoi An?
Obodo ochie nke Hoi An, bụkwa nke a maara dị ka Obodo OchieỌ dị ezigbo mma ileta ma ị nwere ike ịga ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya ígwè. N'ezie, otu n'ime njirimara ya kachasị mkpa nke ebe a bụ na anaghị anabata ohere ịnweta ụgbọ ala ka okporo ụzọ agaghị emetụta ije gị ma ọlị. Naanị ụzọ nke ịnyịnya ígwè ka a kwere ma ọ bụ ezie na mgbe elekere atọ nke ehihie oge mpaghara ọ bụ onye ji ụkwụ aga. Ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ ịgagharị na etiti akụkọ ihe mere eme ya, ma nwee ọ shopsụ na ụlọ ahịa ya na ihe ndị nwere akara ngosi na ụlọ ya nke gosipụtara ntụgharị nke akụkọ ntolite. Ọ bụ ụzọ dị mma iji gafere oge! Thinkche na e chebewo obodo a n'ọnọdụ dị mma n'ihi na, n'oge a na-alụ Agha Vietnam, ọtụtụ agha ndị a gbara n'obodo agbata obi Hue, na Hoi An ọtụtụ n'ime mwakpo ahụ jupụtara n'ime ya, na-ekwe ka ọ dịrị n'ọnọdụ ka mma.
Ihe dị oke mkpa n’obodo ndị dị ka Hoi An na-eleta ahịa ndị dị na mpaghara ahụ, ọ bụ ebe ahụ ka ị na-akpọtụrụ ndị obodo ma ị nwere ike ịhụ ọdịbendị obodo ahụ nso. N'akụkụ ụlọ ahịa dị na obodo ahụ bụ ebe ime obodo na-amalite Hoi AnỌ bụrụ na i leruo ya anya nke ọma, ị ga-achọpụta na ọ bụ isi ụzọ atọ dị na ya na-acha odo odo nke ejiri oriọna chọọ ya mma, ebe ị na-eche ma ghọta oge na-aga ka ha na-eduzi gị ozugbo na obodo ochie.
Ọ na-ukwuu tụrụ aro ka a abalị ije site na n'okporo ámá nke Oge ochie Gan.Site n'ụtụtụ ruo elekere 22:30 nke abalị, e jupụta n'okporo ámá ọkụ na-ejegharịndị ochie, nke na-agwa gị ka ị jee ije dị jụụ ma dịkwa jụụ site na etiti obodo. Buru n'uche na ruo oge ahụ ụlọ ọrụ, ụlọ nri na ụlọ ahịa na-emeghe.
Anyị na-echetara gị na ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ọ na-ezo na mmiri Hoi AnỌ bụ ezie na eziokwu bụ na otu n'ime amara ndị kachasị akọwapụta obodo a. Yabụ kpoo jaket mmiri ozuzo gị na nche anwụ, ekwekwala ka monsoons kwụsị njem gị! Nke a bụ n'ezie otu n'ime oge kachasị mma iji gbaba n'ime ụlọ ahịa ya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ iji zuru ike obere wee gaa iji nwee obi ụtọ n'abalị na Hoi An, ihe ngosi mara mma ma na-enwu gbaa yana ọkụ na oriọna na-efegharị n'obodo ahụ. . Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ịchọrọ izere ọnọdụ a, ị nwere ike ịtụle ileta obodo ahụ n’oge ọkọchị karịa oge oyi.
Gaa LAGHACHI JAPANESE BRIDGE / CAU CHUA PAGODA
Ọ bụ ndị kasị ama akwa na Hoi An, na otu n’ime akara ngosipụta kachasị n’obodo. Ọ Japan ntekwasa àkwà mmiri ọ na-egosipụta ngwakọta pụrụ iche nke mmetụta ime obodo na nke mba ọzọ, ma na-echekwa ihe ịtụnanya na njedebe ọ bụla site na akara ngosi akara ngosi: nkịta na enwe. Dị ka akụkọ a na-aga, nke a bụ n'ihi na a mụrụ ọtụtụ ndị eze ukwu Japan n'oge ahụ n'afọ "enwe" na afọ "nkịta". Agbanyeghị, echiche ndị ọzọ na-egosi na ọ bụ maka na a malitere iwu ya n'afọ "enwe" wee wuchaa ya n'afọ "nkịta".
Osimiri Japan na Hoi An E ji osisi mee ya ma ndị Japan wuru ya na mbido narị afọ nke iri na asaa. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu n'ime ebe nleta kachasị aga n'obodo. Anyị na-ahụ na ọ dị na nsọtụ ọdịda anyanwụ nke Tran Phu Street, otu n'ime okporo ámá ndị dị n'akụkụ ọwa mmiri obodo ahụ.
Anyị ga-eburu n'uche na anyị ga-etinye pagoda Japanese Bridge dịka akụkụ nke ihe ncheta na tiketi anyị mgbe anyị nọ na ebe ndị njem nleta, ebe ọ bụ ihe a chọrọ iji kwụọ ụgwọ maka ya mgbe ị gafere. Ọ bụ naanị akwa mmiri dị n'ụwa nwere ụlọ nsọ yana ọnụ ụzọ ya ga-akwụ ụgwọ. N’ime àkwà mmiri ahụ, anyị ga-ahụ na e ji osisi rụọ ihe owuwu ahụ, juputara na foto ochie na lanternụ ndị tụrụ àgwà.
Ozugbo ị gafere akwa ahụ gaa n'akụkụ nke ọzọ, ị ga - ahụ na ọ dị ịtụnanya niile, amaala ama amaala. N'ezie, ọ bụrụ na ị ga-achọpụta na ụlọ ahịa na ụlọ ahịa dị ntakịrị ọnụ ala n'akụkụ nke a, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ ihe site na ahịa, nke a ga-abụ nhọrọ kachasị mma. Iche ụlọ ahịa, otu na-esote nke ọzọ, ị ga-ahụ akụ, mpempe nka, kites mara mma, ihe ncheta na ọtụtụ oriọna ndị na-enweghị ngwụcha ị ga-achọ ịla n'ụlọ dị ka ihe ncheta.
MAARA OLLỌ Ochie nke TAN KY
"Tan Key" pụtara "Ọganihu Ọganihu". Nke a bụ ikekwe ụlọ ọdịnala nke obodo ahụ dum, ọ bụkwa otu n'ime ụlọ ndị ama ama ama ama ama ama ama Hoi An. Anyị na-achọta na ọ dị na Nguyen Thai Hoc Street (101) naanị nkeji atọ site na akwa mmiri Japan. N'azụ mpaghara mmiri, anyị hụrụ gị n'okporo ụzọ Bach Dang.
Ọ bụ ndị atọ dị iche iche wuru ya; otu Chinese, otu Vietnamese na otu Japanese, ya mere ọ dị mma ịmata mba niile dị iche iche gosipụtara n'otu ụlọ ahụ. Ọ bụ ezie na eziokwu bụ na ndị a di iche iche bụ nnọọ ahụkarị nke Hoi An, ọ bụkwa ya mere eji ewere ya dị ka otu n'ime njirimara kachasị ama nke obodo.
NA-AHJ AKW PKWỌ AKWERKWỌ AKWERKWỌ (PUPPETS)
na puppị mmiri o Ihe ngosi puppet mmiri bụ otu n’ime ebe kacha adọrọ mmasị na Vietnam. Ọbụlagodi na ịmaghị Vietnamese, site na gburugburu ị maara na ị maara akụkọ ihe mere eme n'ụzọ zuru oke! Ha na-atọ ụtọ nke ukwuu ma bụrụkwa ihe ngosi na mba ahụ. Omenala ya, nke malitere na XNUMXth narị afọ, sitere na ugwu nke mba ahụ, mgbe ndị obodo ahụ ji nke a mee ihe dị ka ụdị ntụrụndụ mgbe idei mmiri juru n'ubi osikapa mgbe emume ahụ gasịrị, na-anọchi anya akụkọ nke ndụ kwa ụbọchị na nke ime obodo n'ụzọ ntụrụndụ na ụzọ dị iche iche. nke ógbè dị iche iche, dịka ịkụ azụ na iwe ihe ubi.
Ọ bụkwa ụdị ngosipụta nke akụkọ ifo Vietnamese na akụkọ ama ama n'oge ahụ. N'oge ahụ, ndị mezuru ọrụ ndị puppers zoro n'azụ achara na mmiri ruo n'úkwù ha, ma jiri mkpịsị osisi dị ogologo "mee ka ụmụ nkịta ahụ pụta n'ime mmiri ahụ". Taa, enwere ụlọ ihe nkiri dị iche iche n'obodo mepụtara karịsịa maka ihe omume ndị a, na-esonyere ya mgbe niile na ndị otu ọdịnala Vietnamese iji kwado ebe a. Agbanyeghị, a na-eji ọdọ mmiri ụfọdụ eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi n'obodo ndị gbara ya gburugburu Hoi AnNakwa na obodo ahụ n'onwe ya, ọ bụ ezie na ọtụtụ na-etinye ọdọ mmiri ndị a na-ebugharị ebugharị iji mee ihe ngosi n'obodo ahụ ka ndị njem nleta nwee ike iru.
Ọ bụrụ na-amasị gị ụdị ọdịnala ndị a, na akụkụ nke elu nke obodo Hoi An enwere ụlọ ihe nkiri (otu n'ime ndị a kacha mara amara na mba ahụ) na-adịghị ihe karịrị 1km site na obodo ochie ahụ, na-eso n'okporo ụzọ. Na-ahụ ya ka o mepere na Wednesde, Fraịde na Satọde, ụbọchị nke ha ji otu ọrụ ghere oghe n'ihu ọha n ’elekere isii nke ụtụtụ. Gaghị ida a!
Isi saịtị nke mmasị na Hoi AN
Chalọ nke ezinụlọ Tran
Anyị na-ahụ ya dị na ọnụ ọgụgụ nke 21 nke Le Loi. E wuru ya na 1802 site na Tran Tu Nhac, Mandarin a na-akwanyere ùgwù n'oge ọchịchị Gia Long. N'ime ụlọ ụka a, ị nwere ike ịhụ foto nke ndị nna nna nke ezinụlọ Tran, nke ghọrọ akara ngosi na akara ngosi maka "ezinụlọ Vietnamese" nke oge ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-arụ ọrụ dịka ebe ofufe maka ndị nna nna nke ezinụlọ. O nwekwara ụlọ ahịa ihe ncheta Vietnam pụrụ iche, nke dị ezigbo mma n'obodo.
“Lọ "Mgbakọ Mgbakọ Cantonese" / Quan Trieu
Halllọ Mgbakọ nke Cantonese Ọ bụ ụlọ nsọ mara mma nke ndị ahịa Cantonese nke China wuru na 1885. Naanị ọnụ ụzọ nke ebe a dị oke mma ma bụrụ nke a na-agaghị echefu echefu, n'ihi na nnukwu dragon dragon na-ekele gị, nke na -emekarị nnukwu mmetụta na ndị ọbịa. O nwekwara nnukwu mkpokọta nke obere dragọn ndị ọzọ n'ụdị Cantonese nke ekesara ebe niile. Dabere na akụkọ mgbe ochie, emepụtara akụkụ ya n'otu n'otu na China wee bufee ma zukọta Hoi An. You nwere ike ịchọta ụlọ nzukọ nzukọ Cantonese ihe dị ka 50m n'aka ekpe nke akwa mmiri Japan.
Halllọ Mgbakọ Phuc Kien
-Lọ ihe ngosi nka nke ụlọ, nke a na-ejikwa dị ka ụlọ mgbakọ, bụ nke kachasị iche na ndị ọzọ site na mma ya na mma ya, gbara ya gburugburu ogige mara mma. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị agakarị na ya niile Hoi An maka akụkọ ihe mere eme na ọ nwere ụlọ na otu esi echekwa ya nke ọma na mpụga na n'ime, nke pụtara maka ịnweta ihe atụ nke ụgbọ mmiri site na 1875, nnukwu ebe ịchụàjà na ihe osise mara mma nke oge ahụ. Emere ya site na narị afọ nke iri na asaa ma ọ bụ ndị ahịa China nyere ya ebe ahụ maka chi nwanyị nke oké osimiri na ndị ọrụ ụgbọ mmiri.
AKW THKWỌ AKW THKWỌ B TH
Osimiri Thu Bon, na-agafe n'etiti obodo ahụ ma bụrụ otu n'ime ebe kachasị mma nke Hoi An. Na mgbakwunye na iweta ịma mma na ịdị ọhụrụ na obodo ahụ, ọtụtụ ndị bi n'obodo a ha na-eme ka ndu ha dabere na eDịka ọmụmaatụ, ndị ọkụ azụ na-aga ịkụ azụ kwa ụbọchị, ma ọ bụ naanị n'ihi na ọ bụ ụzọ magburu onwe ya isi kwaga site na obodo ruo n'obodo.
Otu n'ime ọrụ ndị isi ị nwere ike ime na nleta gị Hoi An bụ ị gaa njem ụgbọ mmiri iji mụtakwuo banyere ndụ na amaghị ihe nke ndị ọkụ azụ na mpụga obodo ahụ. Naanị ihe karịrị ọkara elekere tupu ọdịda anyanwụ bụ oge dị mma karịa ịmalite njem a, ọ ga-abụ ihe ngosi na kwa, ọ ga-enwe echiche dị iche nke obodo ahụ! Karịsịa mgbe ọchịchịrị gbara, mgbe ememme ọkụ, agba na lanterns bidoro.
Gaa na osimiri na Hoi AN
Hoi An awade 20 kilomita nke osimiri iji zuru ike na a dị iche iche na gburugburu ebe obibi. Ọ dị mma iji jụụ n'oge kachasị ọkụ n'afọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị gara obodo ahụ n'oge ọkọchị. N'elu ụsọ osimiri, ị ga-ahụ ụfọdụ ụgbọ mmiri Vietnamese gbara gburugburu, nke a na-ahụkarị ma maa mma na-akpọ "Na-ada”. Ka ọ dị na mbụ, osimiri nkeHoi An Ha na-eme udo na mmiri dịkarịsịrị dị elu. E nwere abụọ tumadi, nso Hoi An: "An Bang Beach" na "Cua Dai".
Osimiri Bang:Nnukwu osimiri nwere ụdị ọrụ dị iche iche na ogwe osisi n'akụkụ naanị 5 kilomita site na Hoi An, na-ewere ụzọ Hai Ba Trung. Nkwado bụ ịbanye na ọdụ ụgbọ ala ikpeazụ, nke bụ nke kacha nso n'akụkụ osimiri.
Cua Dai:Chọta ya n’akụkụ An Bang Beach, ihe dịka kilomita isii site na ya Hoi An, ma nwekwara ụdị ọrụ ọ bụla. Can nwere ike iru nke abụọ site na ọgba tum tum, tagzi ma ọ bụ site na ịgbazite igwe, ebe ọ bụ na enwere ebe ọ na-adọba ụgbọala.
Ahụmahụ nleta Hoi An doro anya na otu n'ime ihe na-atọ ụtọ mgbe ị gara Vietnam! Will ga - ahụ na echekwara ya nke ọma ma dịkwa mma ọmarịcha ma maa mma site na ebe ịlele ya. Ọ bụkwa na akụkọ ntolite ya na ọdịbendị ya na-eku ume site na ihu niile! Ọ bụ n'ezie ihe a na-ahụ anya maka ndị njem niile hụrụ ntụsara ahụ na ọdịnala oge ochie n'anya. Ma gị, ị dịla njikere ịgụnye Hoi An na ezumike ọzọ gị?
A ga-anakwere nkwupụta tupu igosipụta.
Langkawi Archipelago na Malaysia
Anyị na-esi n ’etiti anya dị n’etiti Oké Osimiri Andaman anyị na-ahụ otu n’ime paradaịs kachasị dị egwu n’ụwa nile n’ogo mara mma ya: Langkawi, agwaetiti dị ịtụnanya nwere agwaetiti 104.
Surf na Nazaré, isi obodo nke ebili mmiri kacha ukwuu n’ụwa.
Obodo gbara osimiri okirikiri nke ekwuru na udo dị na ya mana nke ahụ na -eme ka e nwee oke osimiri nke yiri ka ọ bụ nke emebere ọrịrị.
Inyocha Helsinki: njem, ọdịnala na izu ike na Finland!
A kọwara obodo a nke nwere oke osimiri n'akụkụ obodo Baltic dị ka nke dị nwayọ juputara na ihe omuma. Ebe a na nkuku niile nke Helsinki na-akpali akụkọ ihe mere eme, akụnụba ar
Ndagwurugwu Elqui: Njem ha ga -aga na Chile ị nwere ike ịgaghị agbaghara!
Dị na mpaghara Coquimbo, ọdịda anyanwụ nke La Serena, anyị na-ahụ ndagwurugwu Elqui, otu n'ime ebe mara mma kachasị mma na obodo ahụ niile, yana South America.
Otu n'ime ebe kachasị mma maka ikuku ikuku na kitesurfing bụ ịrụ ụka adịghị Tarifa, n'ógbè Cádiz A maghị ya n'efu dị ka isi obodo ifufe! Dịla njikere ibupu gị
Njem njem nlegharị anya aghọwo otu n'ime ọrụ ndị na-adọrọ adọrọ n'oge ọkọchị a! Omume nke jikọtara usoro kacha mma nke ịgba ịnyịnya na njem njem. You bụ gra
Ọ bụrụ na nke a abụghị oge mbụ ị na-eleta New York, ị nwere ike chọọ ịlaghachi ma lee anya ọzọ. Nnukwu obodo a bụ ebe obibi kachasị ewu ewu n'afọ ndị a: Hudson Yards. SIG
Ntị, ndị njem na-ahụ maka njem njem! Anyị maara na ha nwere mmasị ịmara ebe ọhụụ ma bie ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu na-etinye ndụ ha na oke. Na ohere a, anyị na-aga